7 xal oo loo hayo dadka khuuriya - Muraayad
Home Arimo Bulsho 7 xal oo loo hayo dadka khuuriya
7 xal oo loo hayo dadka khuuriya
Maku jirtaa dadka ay djibaatada ku heyso khuurada ama lagu dhibsado?
Dad badan waxay dhahaan jacaylku wax walba wuu ka adag yahay. Buuraha iyo badaha ayuu dhex jiiraa wax hor istaagi karana ma jiro marka laga reebo khuurada.
Taas micnaheedu waa in badanaa qofka ku jecel uusan kuugu dulqaadan karin inaad khuuriso ama cod dheer sameyso marka la gaaro xilliga hurdada lagu jiro.
Daraasado la sameeyay oo ay dhaaciyeen warbaahinta reer galbeedka qaarkood waxay muujiyeen in khuuradu ay tahay sababta saddexaad ee keenta furriinka ugu badan ee ka dhaca Mareykanka iyo UK.
Haddaba halkan waxaan kuugu heynaa dhowr xal oo aad u wanaagsan, oo kaa caawin kara inaad khuurada iska joojiso.
1- U seexo dhinaca
Haddii aad dhabar dhabar u seexato qeybta hoose ee carrabkaaga ayaa hoos u dageysa waxayna xireysaa qeybo muhiim ah oo ka mid ah dhuunta, taasina waxay sababeysaa in uu ciriiri ku yimaado marinkii hawada.
Waxa ugu horreeya ee dhacaya waa in uu abuurmo codka lagugu dhibsanayo ee khuurada.
2- Miisaankaaga iska dhin
Qodobkan wuxuu u dhow yahay kii hore. Marka aad cayilan tahay waxaa baruur yeelanaya sambabadaada iyo gudaha dhuunta. Halkaasna waxaa ku yaraanaya waddadii ay soo mari lahayd hawada.
3- Sankaaga fur
Inta badan neefsashada dhinaca afka ah ayaa keenta khuurada, taasna waxay imaataa marka uu sankaaga xiran yahay oo aysan soo mari karin hawo.
Talada ugu fiican waa inaad sanka gudihiisa furto. Haddii ay suurtagal tahay ku buufi dawooyinka loogu talogalay nadiifinta gudaha sanka. Khuurada inaad joojiso waxaa kuu sii dheeraanaya in ay hurdadaadu fiicnaan doonto.
4- Caawinaad dheeri ah raadso
Haddii talooyinka aan kor kusoo xusnay ay waxba kuu tari waayaan, booqo dhakhtar oo hala hubiyo in ay jiraan cillado dheeraad ah, sida in gudaha sankaaga uu ku yaallo hilib u baahan in la jaro.
5- Isticmaal dawo dhaqameedkan
Labo koob oo boyo ah karkari kaddibna ku dar caleenta reexaanta. Cab inta aadan sariirta tagin ka hor. Sidoo kale shaaha lagu sameeyo caleenta cagaaran ee loo yaqaanno mint ayaa kaa caawin kara inaad joojiso khuurada.
6- Iska nadiifi guriga
Xasaasiyadda ka imaata Busta ama boorka ayaa inta badan sababta khuurada.
Ku dadaal inaad mar walba nadiifiso gurigaaga, gaar ahaan qolka jiifka.
7- Ka taxaddar cuntadaada
Iska ilaali inaad aad u dharagto hurdada ka hor. Sidoo kale ha isticmaalin maandooriyaha aalkolada leh sababtoo ah wuxuu dabciyaa neerfaha dhuunta wuxuuna keenaa khuurada.
Previous articleIn qol qabow la seexdo waxay leedahay faa’iidooyinkan
Next articleArrin aan la fahamsaneyn oo wadne xanuun iyo cudurka sokorta sababta